Niainga ny sabotsy alina tamin'ny 00ora23min (zoma 16ora23 GMT), 16 oktobra 2021, tany Gobi, avaratra andrefan'i Sina, ny sambondanitra Shenzhou-13, natosiky ny fusée Longue-Marche 2F, nitondra mpanamory telo mianadahy, hiazo an'i Tianhe («Harmonie céleste »), singa voalohany tsy nisy olona amin'ny sambondanitra Tiangong («Palais céleste ») vao ahorina, nalefa tamin'ny volana mey teo. Vao ny module voalohany, efa miodina manaraka ny tany eny amin'ny 350-400km i Tianhe. Misy module 3 izy rehefa vita, ka ireto mpanamory 3 ireto no hisantatra ny fipetrahana maharitra 6 volana ato amin'ity module voalohany ity, raha naharitra 03 volana ny an'ireo mpanamory nandeha ny volana septambra lasa teo, niaraka tamin'ny Shenzhou-12. Hanohy ny fanomanana ny fanamboarana ity sambondanitra lehibe ity izy 3 mianadahy ireto. Anisan'ny fanamby amin'ity dia eny ambony ity, ny fijanonana ela eny ambony eny, satria noho ny tsy fisian'ny sinton'ny tany, dia mihamalemy aingana be ny taolan'olombelona, ary miazakazaka ny fahanteran'ny taova rehetra. Hisy ny fivoahana indroa na in-telo ny sambondanitra.
Miantso vonjy ireo teratany Malagasy any Chine izay maniry hody an-tanindrazana. Manodidina ny 70 eo izy ireo, tsy maintsy mody noho ny antony samihafa. Nahavita fianarana efa amam-bolana maro fa noho ny fikatonan’ny sisintany malagasy dia tsy afaka nody. Efa lany tamin’ny fahavitan’ny fianarana anefa ny “visa”. Misy mpiasa tapitra “contrat” ary lany “visa” ihany koa. Ao no nihevitra fa hiala sasatra fotoana fohy no nandehanana tany Chine nefa noho ny Covid-19 sy ny fikatonan’ny sisintany dia tafajanona tsy fidiny tany efa ho herintaona mahery. Manana olana amin’ny “visa” ihany koa. Betsaka ny efa lany “visa”. Sarotra anefa ny fahazahoana ny “visa” satria tsy manana antony mazava hijanonana any Chine intsony ireo teratany Malagasy ireo. Tsy manome “visa” mihoatra ny 15 andro ny Sinoa ary misy mihitsy aza no efa tsy nomeny “visa” intsony.
Nankatoavin’ny filankevitry ny minisitra ny alarobia 13 oktobra 2021 ny fisokafan’ny habakabak’i Madagasikara amin’i Eoropa mankaty Antananarivo, miaraka amin’ny Air Madagascar sy Air France. Afaka miditra ihany koa arak’izany ireo « vols charters » avy any Milan/Rome Eoropa mankany Nosy-Be Hell-Ville. Mikasika ny sidina na « vol long-courrier » Europe dia hanomboka amin’ny 06 Novambra 2021 izany. Nankatoavina ihany koa ny fisokafan’ny lanitr’i Gasikara amin’ny sidina eto anivon’ny Ranomasimbe Indiana izany hoe : Maurice –Madagasikara (Air Mauritius) sy La Réunion- Madagasikara (Air Austral) ka vinavinaina amin’ny 23 Oktobra 2021 ho avy izao no hiatombohan’izany. Ankoatry ny « évacuation sanitaire » dia mila “autorisation spéciale”, izay ankatoavin’ny Praiminisitra sy ny Filoham-pirenena ny fidiran’ny « Jet privé » na ny « sidina tsy miankina manokana ». Ireo fepetra mifandraika amin’izao fisokafan’ny habakabaka izao :
Nanao fitsidihana ireo barazy sy lakandrano ny solotenan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana amin'ny alalan'ny FORMAPROD tao amin'ny lemak'Ankazoambo distrikan'Ambositra, faritra Amoron'i Mania. Hita fa efa vita ny asa amin'ny ankapobeny, ary tody soamantsara ny rano, ka tsy misy atahorana ny hahatapaka azy mandritr'izao fotoana maintany izao.Tsapa fa mihezaka ny mpampiasa rano manajary ny taniny, ka ao ny manao voly avotra, ao no manomana dobo-trondro sns.
Nodimandry ny talata 7 jolay 2020, vanimpotoana nampamaivay ny valanaretina Covid-19, i Rakotomalala Lucien dit «Le Fomela», solombavambahoaka IRD voafidy tao amin’ny Distrika Morombe, Faritra Atsimo Andrefana. Voalaza fa nanana areti-mitaiza sohika ity parlemantera ity. Talohan’ny nifaran’ny fotoam-pivoriana ara-potoana ny Antenimieram-pirenena izy no efa tsy salama, ary tsy tonga niatrika fivoriana intsony. Tao amin’ny Hopitaly Miaramila Soavinandriana no nitsaboana azy, saingy tsy tana ny ainy.
Nampanantena lalana rarivato ny Governoran'ny Faritra Analanjirofo, asa tokony novitaina roa volana. Nampanantena ihany koa ny minisitra Hajo Andrianainarivelo fa hanamboatra lalana ao Maroantsetra tampon-tanana, amin'ny volan'ny Tahiry fikojana ny lalana (FER). Orinasa an'ny Senatera iray amperinasa no nahazo ny tsenan'asa ho an'ity farany. Nisy fandravana tranon'olontsotra.Zara fa nanomboka ny asa dia nikatso teo, efa amam-bolana maro izao. Efa haniry bozaka aza ny sasany, ary vao maika feno lavadavaka. (Jereo Sary Tohiny)
Hisitraka tetikasa "Pôle urbain" ny tanànan'i Fianarantsoa, renivohitry ny Faritra Matsiatra Ambony. Hisy fanorenana lalan-dehibe na "Avenue", toeram-pivarotana isan-karazany, ary kianja "Coliseum" ao Ambatomena, araka ny fampanantenana nataon'ny Filoha Andry Rajoelina tamin'ny mponin'i Fianarantsoa. Hisy toerana fitsangatsanganana toy ny zaridaina lehibe sy ny “esplanade” ao amin'io toerana io. Hapetraka eo ihany koa ny biraom-panjakana isan-tsokajiny sy izay rantsa-mangaikan'ny Ministera rehetra. (Jereo Sary Tohiny)
Nametraka fitarainana ireo mponina ao amin’ny fokontanin’Antsahaondra mipetraka manodidina ny faritr’i Rova Manjakamiadana ao Ankadinandriana fa misy vatobe maromaro amin’ny toerana iray, izay efa miha-mitriatra ny ankamaroany ary ahiana ny hianjeran’izy ireo ka atahorana hanimba fananana sy mety amohizana ain’olona noho ilay toerana sady lalan’ny mponina no ahitana trano manakaiky azy io. Tonga teny an-toerana androany zoma 08 oktobra 2021 ny tompon'andraikitra avy ao amin’ny BNGRC, solotenan’ny Kaominina Antananarivo renivohitra, lehiben’ny Fokontanin’Antsahaondra sy ny ekipany ary ny solotenan’ny Sosialy nijery akaiky ireo vatobe mitriatra sy ireo trano mety ho tratry ny fianjeran’ny vato.
Nankatoavina tamin’ny filankevitry ny minisitra ny hametrahana ny Ivontoerana Famindràna Voa (Centre de Transplantation Rénale) eo Andohatapenaka. Noho ny fandrosoan’ny fahaiza-manao sy ny fivoaran’ny fitsaboana dia miara-manaiky ireo manampahaizana manerana izao tontolo izao fa azo sorohina amin’ny alalan’ny famindràna taova ny fahafatesana sy ireo olana ara-pahasalamana goavana ateraky ny fahasimbana taova. Ao anatin’ny vinan’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka ny fanomezana alalana ny famindrana sy fanaovana grefy taova eo anivon’ireo CHU an’ny fanjakana izay manana ny fitaovana ilaina sy takiana ahafahana manatanteraka izany ao anatin’ny fanajàna tanteraka ny fenitra. Ho an’i Madagasikara, fandaniana mihoa-pampana ny fandefasana olona hitsabo tena any ivelany mba hanatanteraka famindràna voa. Izay antony izay etsy andaniny no namporisika ny fanjakàna hametraka izao ivon-toerana voatokana izao. Etsy ankilany kosa ny fanaovana volavolan-dalàna mikasika ny famindràna sy fanaovana grefy taova hafa ankoatran’ny voa.
Hohajariana tanteraka ny moron-dranomasin'i Libanona izay tena mampalaza ny tanànan'i Tolagnaro, ary tsy ho mena-mitaha amin'ireo morontsiraka malaza any ivelany. Napetraka, ny sabotsy 2 oktobra 2021, ny vato fototra ho mariky ny fanombohan'ny asa. Ho tanterahina miaraka amin'ny orinasa TELMA ny asa fanamboarana, ary afaka 8 volana no vinavinaina ho vita ny asa. Hisy toerana fanaovana fampisehoana, toerana fialana hetaheta sy hahafahan'ireo mpitsangatsangana mijery ny masoandro mody ao an-toerana. Apetraka ao an-toerana ihany koa ny "connexion WIFI" maimaim-poana. (Jereo Sary Tohiny)